मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरी वीरगंजको मुख्य सडक नै अहिले हिलाम्मे भएको छ । महानगरका रुपमा स्तरोन्नति भइसकेको यो नगरको मुख्य सडक नै हिलाम्मे भएको हो ।
सन् १८९७ ( वि.सं. १९५४) मा राणा प्रधानमन्त्री वीरशम्शेरले बसाएको वीरगंज शहर आर्थिक राजनीतिक तथा ऐतिहासिक हिसाबले देशको प्रमुख शहर मध्ये एक हो । यसै शहरको मुटु घण्टाघर अगाडीको सडक हिलाम्मे मात्र नभई जोखिमपूर्ण पनि भएको सास्ती खेपिरहेका स्थानीयले बताए । विभिन्न समयको सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनमा मुख्य योगदान दिने यो शहर विकास र समृद्धिको हिसाबले जहिले पनि उपेक्षामा पर्ने गरेको उनीहरुको तर्क छ । हुँदा हुँदा स्थानीय सरकारले समेत अब यहि नगरलाई उपेक्षा गर्न थालेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । राजनीतिक अदूर्दर्शीताका कारण विकास निर्माण तथा सरसफाईमा पनि पछाडी परेको स्थानीय मुन्ना सरार्फले बताए । महानगर भने पनि सोचे अनुरुपको सेवा सुविधा नभएकोले वर्षात्मा हिलाम्मे र घाममा धुलाम्मे हुने यो सडकले निकै सास्ती दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश २ को एक मात्र महानगर समेत भएको वीरगंज देशकै प्रवेशद्वारको रुपमा पनि परिचित छ । २०७४ जेष्ठ ९ गते ग्रामिण भेगलाई समेटेर महानगर घोषणा भए पनि ग्रामिणको त के कुरा मुख्य सडक मै वर्षैदेखि बनाउन वीरगन्ज महानगरले समेत ध्यान नदिएको वीरगन्जवासीको आरोप छ । वीरगन्जवासीले महानगरपालिकालाई दाषी देखे पनि महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले भने सडक विभाग तर्फ दोष देखाउँदै उम्किदै आएका छन् ।
४५ हजारभन्दा बढी घरधुरी र लगभग ३ लाख जनसंख्या रहेको महानगरमा सडक, नाला तथा सरसफाईको अवस्था जनप्रतिनीधि आए पनि सध्रिन सकेको छैन । नगरप्रमुखले चाहेका नीजि कम्पनीलाई सरसफाइको जिम्मा दिएर पनि अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको खुद जनप्रतिनीधि मध्ये केहीले बताउन थालेका छन् । ४३ प्रतिशत बढी राजश्वको योगदान दिने शहरको रुपमा रहेको वीरगन्जको सौन्दर्यीकरणको कुरामा भने स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकार सबै निकम्बा सावित भएको वीरगन्ज महानगरको उपप्रमुख शान्ति कार्कीले समेत विभिन्न कार्यक्रममा पटक—पटक बताउँदै आएकी छन् ।
शहरको मुख्य केन्द्रविन्दुमा पर्ने सडककै अवस्था दयनीय हुदाँ सडक विभागको दोष लगाउने नगरप्रमुख सरवागी भने जगदम्बा सिमेन्ट तथा जगदम्बा पाईप लगायतको उत्पादन प्रचारको जिम्मा नातामा सम्धी पर्ने रमेश अग्रवाललाई दिलाएर प्रचारमा तल्लिन भएको स्थानीय कपडा व्यापारी प्रकाश मरानीयाले आरोप लगाए । नगरप्रमुखले नीजि कम्पनीको प्रचार गर्न मिल्ने तर सडक बनाउन नमिल्ने भन्ने कुन नियममा पर्दछ र ? कपडा व्यवसाय सञ्चालन गरेका स्थानीय प्रकाश मरानियाले आरोप लगाए । व्यापारमा समस्या छ ।
महानगरले केहि जिम्मेवारी लिएको छैन । यो सडकमा दूर्घटना भए सडक अगाडीको पसलेलाई उल्टै गाली दिने गरिन्छ स्थानीय सरकारको दायित्व यत्ति हो उनले तर्क गरे । महानगरको मुटुमा रहेको घण्टाघर–माईस्थान सडकखण्डको यो हालत छ भने ग्रामिण वडा रहेको महानगरको अन्य सडकखण्ड झन कस्तो होला ? नगरवासीले प्रतिप्रश्न गरे ।
महानगर प्रमुख विजय सरावगीले भने यो मुख्य सडक टिआरपी सडक हो । यो सडक संघ सरकार अन्तर्गत पर्ने सडक हो । वहाँहरुले सडक बनाउनु पर्ने हो । तर महानगरले गाली खानु परेको तर्क गरे । ५ महिना अगाडी मात्रै घण्टाघरदेखि पावर हाउसको सडक महानगरले नै बनायौ । जनताले महानगरलाई मात्रै गाली गर्ने भएकाले बाध्य भएर हामीले त्यो सडक बनाउनु प¥यो उनले भने । घण्टाघरदेखि माईस्थानसम्मको सडक पनि अहिले हिड्न मिल्ने अवस्थामा छैन । सडक विभागले नबनाए यो सडक पनि अब महानगरले नै बनाउन पर्ने बाध्यता हुन्छ नगरप्रमुख सरावगीले बताए । जनप्रतिनीधिले गर्ने भनेकै जनताको सेवा हो । देशको तिनवटै निकायले कम्तीमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे अनाहकमा जनताले दुःख पाउने थिएनन् ।
हामीले यो सडक बनाउनका लागी पहल नगरेका होइनौं नगरप्रमुख सरावगीले तर्क गरे । स्थानीय वासिन्दाले हामीलाई गाली गर्छन् । उनीहरुलाई बास्तविक कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । जनताको सेवक भएपछि आरोप पनि सुन्नु परेको छ । संघ सरकारले बनाउनु पर्ने सडक हामीले बनाउन थाल्यौं भने सम्भव पनि नहुने र त्यति बजेट पनि नपुग्ने र महानगरले गर्न पनि नसक्ने नगरप्रमुख सरावगीको भनाइ छ । रहयो प्रचारको कुरा त्यो विधिवत रुपमै भएको हो बुझन सक्नुहुन्छ उनले पुनः तर्क गरे ।
#वीरगंज महानगरपालिका #मेयर विजय सरावगी
मगलवार, कार्तिक ९, २०७८, ०२:१०:००